Cudur Halis ah oo Laga Baqaayo inuu Qaarada Afrika ku Fido, Waddanka Laga Helay iyo Dalalka Degdega loogu sii Digay | Maankaab.com
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, ayaa la tacaalaysa sidii ay xakamayn lahayd xannuun hawada ku fidaya (Airborne Plague)oo ku dhuftay dalka Madagascar, iyadoo laga cabsi qabo inuu sagaal dal oo kalena ku fido.
In ka badan 1,300 kiis oo xannuunkan ah ayaa laga soo sheegay dalka Madagacsar, sida ay madaxda caafimaadka hay’addan tilmaameen, waxaanay ka digeen in dalalka u dhaw Madagascar ay ka feejignadaan khatarta xannuunkan hawada si fudud ugu fidaaya.
Xannuunkan ayaa 75% ah mid si deg deg ah wax u dilaaya, sidoo kalena si fudud loogu kala qaadi karo hawada (pneumonic), sida ay khubarada WHO caddeeyeen.
Cudurkan khatarta ah ayaa ay sababtaa bakteeriyo la mid ah mid 1300 aadkii laysan 50 milyan oo reer Yurub ah. Sidaa darteed cudurkan halista badan oo reer Yurub u yaqanaan Dhimashadii Madoobayd (Black Death), ayaa ku fida qufac, isla markaana qofka 24 sacadood gudahood ku dilaya.
Xannuunkan ayaa si deg deg ah u fidaaya, iyadoo laga cabsi qabo in dad badan oo ku nool dalalka Seychelles, Koonfur Afrika iyo La Reunion ay qadaan.
Geesta kale, lixda dal ee halista ugu jira in xannuunkan si deg deg ah u fido waxa ay yihiin Musaanbiig, Tansaaniya, Kenya, Itoobiya, Komoros iyo Murishis, waxaana dhammaan dalalkan loo diray farriin deg deg ah oo ay ugu diyaar garoobayaan xakamaynta xannuunkan.
Waxa kale oo wararku sheegeen in 50 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ay ka mid yihiin dadka uu asiibay cudurkan halista badan.
Waaxda Hay’adda Caafimaadka ee WHO u qaabilsan Afrika ayaa sheegtay in 93 qof ay u geeriyoodeen xannuunkan ilaa hadda, taasoo macnaheedu tahay in tirada dhimashadu ka yar tahay 124 qof oo UN-tu shaacisay in xannuunkan ay u dhinteen.
“Khatarta xannuunkan waxa ay ku fidaysaa si aad ah, sababtoo ah waqtigan waxay ka jirta dhawr tuulo, waana bilawga baahista cudurka,” ayuu yidhi sarkaal u hadlay hay’adda WHO.